IGTV Shopping yave kuwanikwa pa Instagram - Winches Club
Instagram yakazivisa kutanga kwemwedzi uno kuti IGTV kutenga iko zvino kuri kwepasirese.
Kubudirira kukuru kwechinhu chekutenga kunouya mushure mekudya kwenhau, nyaya uye mhenyu zvinyorwa zvakashandiswa nemabhizinesi mazhinji uye varidzi vemakambani.
Instagram yakataurwa qu’environ 130 millions de personnes consultent les posts de shopping chaque mois.
Kupiwa aya manhamba, zvaive nemusoro wakakwana ku Instagram kuvhura IGTV yekutenga basa.
Chinangwa chekutanga chechitoro mashandiro aive ekubatsira mabhizinesi kukura mberi uye, kubva pa Instagram, 60 % des utilisateurs reconnaissent explorer et découvrir de nouveaux produits sur Insta.
Kana usati waisa chitoro chako che Instagram futi, tinokurudzira kuti uzviite. Zvinhu zviri kuchinja nekukurumidza kupfuura nakare kose, uye chimiro chechitoro chave chiri chakakura kurova kune Insta vashambadzi.
Vanga vari vebasa rakakura kuvashandisi nekuvabatsira kusvika kune vateereri vavo nenzira iri nyore uye inoshanda..
Instagram's ekukurumidza kugadzirisa uye shanduko dzinovimbisa kuchengetedza vashandisi vadzo kubatwa. Ipapo, ita shuwa kuti iwe uri chikamu chayo uye tora vateereri vako ne IGTV kutenga.
Unofanirwa here kushandisa IGTV Shopping kune yako brand?
IGTV kutenga mukana unonakidza wevanokurudzira nevanogadzira vanoshandisa chikuva chavo kubatana nevateereri vavo, kuti uwane imwe mari nesimba.
IGTV kutenga kunokutendera kuti utore zvigadzirwa zvauri kutaura nezvazvo mumavhidhiyo ako, zvakananga mumavhidhiyo aya.
Aya mashandiro akafanana neayo anotendera kumaka munhu pamufananidzo., asi nekumaka chigadzirwa panzvimbo.
Kare, vashandisi vaigumira mumabatiro avangaite kushambadza zvigadzirwa zvavari kusimudzira mumavhidhiyo avo.
Kutenda kune mukana wekumaka zvigadzirwa, hauchadi kusiya ma link akawanda mumazita emavhidhiyo ako.
Chimwe chishandiso chine simba ndeye cashier basa, asi parizvino inongowanikwa chete muUnited States. Kana iri yepasi rose, zvinhu zvichachinja zvachose.
Iko kugona kuona chigadzirwa, bata kuti utenge uye Checkout pa Insta iri kuchinja nzira iyo vanhu vanoshandisa Insta kutenga.
Saizvozvo, 70 % de ceux qui font des achats reviennent sur Instagram pour découvrir de nouveaux produits.
Zvakawanda zvachinja mumwedzi yapfuura, uye iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekushandisa ese maficha aripo munharaunda yako kuti awedzere kubudirira kwako.
Iyo ramangwana rekutenga IGTV
IGTV kutenga kwakagadzirirwa kuwedzera uye inogona kunge iri nzira yakanakisa yekukwezva vatengi vako.
Kutenda fomati yevhidhiyo, kurira uye ikozvino kune zvinyorwa zvidiki, zvemukati zvako zviri nyore kupfuura nakare kose. Izvo zvirimo zvirimo zvirimo, pakakura vateereri vako. Uku kushambadzira mukubwinya kwaro kwese.
Munguva yedenda, Instagram yaenda kure kure kuburitsa nyowani maficha senge chitoro basa, iyo QR kodhi uye ikozvino IGTV Shopping.
Chinangwa chavo chikuru chave chiri chekubatsira makambani, mamaki, vanokurudzira nevamwe kuti vasvike pazvavanogona.
Iwe unofanirwa kunyatso tora ino nguva yekufungisisa uye kugadzirisa zvakare ako ekushambadzira marongero nekuita zvakanyanya pazvinhu zvese zvavanopa..
Maitiro ekutora vateereri vako nemavhidhiyo
Kana iwe uchida kuwana zvakazara kubva IGTV kutenga, kutanga iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti unokwanisa kubatana nevateereri vako kuburikidza nemavhidhiyo.
Mavhidhiyo anogona kuve ane simba uye akapusa nzira yekukura yako Insta kuvepo, zvinoenderana nemabatiro aungaita kubatana uye nekuita zvakadzama nevateereri vako.
Mavhidhiyo anoratidza kuzvipira kwako uye anogona kushandiswa nyore nyore kugovana yako brand brand. Kwete chete iwe kuti unopa hwindo mune yako ruzivo, asi vateereri vako vanogona zvakare kunzwa kuda kwako izvo zvaunoshumira.
Kune nzira dzakawanda dzekuita nevateereri vako, Semuyenzaniso:
• Simbisa hunhu hwechigadzirwa
• Ipa zvigadzirwa zvitsva
• Zvemukati mezvinhu zvisati zvatanga chigadzirwa
• Nezvinangwa zvekudzidzisa
• Zvidzidzo zvekudzidzisa
Tevedza rairo pazasi pekuti ungaisa sei vhidhiyo uye wotanga kugovera yako nyaya nevako vateveri nhasi..
Maitiro ekuwedzera nhamba yevateveri pa Instagram organically : 23 méthodes pour 2021
Maitiro ekurodha Instagram Vhidhiyo kune Yako iPhone : 3 Méthodes Et Applications
Article précédentMaitiro Ekutora Tik Tok Maonero – Nhungamiro Inodzidzisa
Article suivantZvese nezve iyo Instagram Checkout